၂၄ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၂
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က Houthi သူပုန်တွေ ဒုံးကျည်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီနိုင်ငံ အဘူဒါဘီက လောင်စာဆီ သိုလှောင်ရာ နေရာတစ်နေရာ (ဓာတ်ပုံ- AFP)
Abu Dhabi မြို့ ကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ပဲ့ထိန်းတပ် ဒုံးကျည် ၂ စင်း ကို ကြားဖြတ် တိုက်ခဲ့တယ်လို့ ယူအေအီး နိုင်ငံ က တနင်္လာနေ့ က ပြောပါတယ်။ ဒုံးကျည် ရဲ့ အပိုင်းအစတွေ က အန္တရာယ် မရှိ ကျရောက်ခဲ့ပြီး ဘယ်သူ့ ကို မှ မထိခိုက်ခဲ့ဘူး လို့ ယူအေအီး ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန က ပြောပါတယ်။ ယူအေအီး နိုင်ငံ ဟာ “ခြိမ်းခြောက်မှု မှန်သမျှ ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိပြီး၊ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှ ဆောင်ရွက်မယ်” လို့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန က ဆိုပါတယ်။
အဘူဒါဘီ က လောင်စာဆီ သိုလှောင်ရာ နေရာတစ်နေရာ ကို ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ယီမင် နိုင်ငံ က Houthi သူပုန်တွေ က ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် က ပြောပါတယ်။ ဒီ တိုက်ခိုက်မှုမှာ လူ သုံးယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ၆ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကတည်းက ယီမင်မှာ ရှိတဲ့ Houthi သူပုန်တွေ တပ်စွဲထားရာ နေရာတွေ ကို ဆော်ဒီ အာရေဗျ ဦးဆောင်တဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့ က လေကြောင်း က တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ ယူအေအီးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်.
Houthiတွေ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ပဲ့ထိန်းတပ် ဒုံးကျည် ဟာ ဆော်ဒီ အာရေဗျ တောင်ပိုင်း ကို ကျရောက်ခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူ တစ်ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဆော်ဒီ အာရေဗျ နိုင်ငံတော်ပိုင်မီဒီယာ က တနင်္ဂနွေ နေ့ က သတင်းဖော်ပြပါတယ်။
Abu Dhabi မွို့ ပဈမှတျထားတဲ့ ဒုံးနှဈစီးကို ဖကျြခနြိုငျခဲ့
Abu Dhabi မွို့ ကို ပဈမှတျထားတဲ့ ပဲ့ထိနျးတပျ ဒုံးကညျြ ၂ စငျး ကို ကွားဖွတျ တိုကျခဲ့တယျလို့ ယူအအေီး နိုငျငံ က တနင်ျလာနေ့ က ပွောပါတယျ။
ဒုံးကညျြ ရဲ့ အပိုငျးအစတှေ က အန်တရာယျ မရှိ ကရြောကျခဲ့ပွီး ဘယျသူ့ ကို မှ မထိခိုကျခဲ့ဘူး လို့ ယူအအေီး ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဌာန က ပွောပါတယျ။ ယူအအေီး နိုငျငံ ဟာ “ခွိမျးခွောကျမှု မှနျသမြှ ကို ရငျဆိုငျဖို့ အသငျ့ရှိပွီး၊ နိုငျငံတျော ကာကှယျရေး အတှကျ လိုအပျတဲ့ ကိစ်စမှနျသမြှ ဆောငျရှကျမယျ” လို့ ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဌာန က ဆိုပါတယျ။
အဘူဒါဘီ က လောငျစာဆီ သိုလှောငျရာ နရောတဈနရော ကို ပဈခတျခဲ့တယျလို့ ယီမငျ နိုငျငံ က Houthi သူပုနျတှေ က ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျ က ပွောပါတယျ။ ဒီ တိုကျခိုကျမှုမှာ လူ သုံးယောကျ သဆေုံးခဲ့ပွီး ၆ ယောကျ ဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျ တိုကျခိုကျမှုတှေ ကတညျးက ယီမငျမှာ ရှိတဲ့ Houthi သူပုနျတှေ တပျစှဲထားရာ နရောတှေ ကို ဆျောဒီ အာရဗြေ ဦးဆောငျတဲ့ မဟာမိတျအဖှဲ့ က လကွေောငျး က တိုကျခိုကျခဲ့ရာမှာ ယူအအေီးလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ.
Houthiတှေ ပဈခတျခဲ့တဲ့ ပဲ့ထိနျးတပျ ဒုံးကညျြ ဟာ ဆျောဒီ အာရဗြေ တောငျပိုငျး ကို ကရြောကျခဲ့ပွီး အနညျးဆုံး လူ တဈယောကျ ဒဏျရာရခဲ့တယျလို့ ဆျောဒီ အာရဗြေ နိုငျငံတျောပိုငျ မီဒီယာ က တနင်ျဂနှေ နေ့ က သတငျးဖျောပွပါတယျ။
ဆော်ဒီ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ယီမင်မှာ ၃၀ ကျော်သေ